I-M3 yeBhotile yePlastiki yeBhotile- iMingsanfeng
Kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-60
Ngaphezulu kweenjineli ezingama-20 eziphezulu
ngexabiso lonyaka lokuphuma kwezigidi ezingama-35.
I-FLIP TOP UKHUSELEKILE-F2349
YOKUQHUBA PHAKATHI CAP-F2619
16CAV M24 flip cap phezulu ...
1, Isiseko seMold senziwe ngesakhelo se-LKM, kunye ne-HASCO s ...
Imibala emibini M28 Flip ngaphezulu ...
Inani leBooth: I-14 B61 ikumema ukuba undwendwele i-CHINAPLAS 2021 Siyakumema ngokufudumeleyo / kwiNkampani yakho ukuba ityelele indawo yethu e-CHINAPLAS 2021, eya kubanjwa ngomhla we-13-16 kuMeyi 2021 e-China Import & Export Fair Complex, e-Shenzhen, e-Guangdong PR China. Ukuba ziindwendwe zethu, ukungena ...
Siye saqokelela inqanaba eliphezulu kakhulu kwaye liphezulu lemoto eshushu yembaleki ekwenziweni komngundo eChin. Idatha yeemveliso zomhlaba ezigobile ifundwa yi-CMM ukuqinisekisa ukuchaneka kwedatha kunye nokuchaneka kweemveliso zesikhunta. Ukujikeleza kwamanzi kongezwe kwinxalenye engumsonto wokwenza, ukuze i-t ...